တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Android Version 4xx ကနေ 4.3 ထိ မြန်မာစာတွေ မှန်စေတဲ့ Zawgyi-One FlipFont (new) ထွက်ရှိ
တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု
ကျွန်တော့် BLOG အားလာရောက် လည်ပါတ်သူများကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ AJ Phone2ဖုန်းဆိုင် Sales & Service Center
Android Version 4xx ကနေ 4.3 ထိ မြန်မာစာတွေ မှန်စေတဲ့ Zawgyi-One FlipFont (new) ထွက်ရှိ
Developer Ko Myo Min Latt ရဲ့ Android Version 4xxx ကနေ 4.3 ထိ မြန်မာစာတွေ မှန်စေတဲ့ Zawgyi-One FlipFont(new) Update လေးပါ .. အရင်က 4.1.2 ထိပဲ အဆင်ပြေပါတယ် .. ခု Update မှာတော့ နောက်ဆုံးထွက် Android Version 4.3 ထိ မြန်မာစာတွေ မှန်စေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ် .. Zawgyi-one Font (14) မျိုးနဲ့ လည်း အသုံးပြုနိုင်မှာပါ... v4.3 ပိုင်ရှင်များ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
- Supported S4 and android 4.2.2 up.
- Beautiful zawgyi-one 14 font pack
- Very easy to change myanmar font for your galaxy devices.
- No need root.
- Low memory space
- Move to SD card or phone.
Developer Ko Myo Min Latt ကို အားပေးတဲ့ အနေနဲ့ Play Store ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းယူပေးကြပါ..။
ဒေါင်းမရတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ Comment လေးချန်ထားခဲ့ပါ .. ပြန်တင်ပေးထားပါ့မယ်..:)
Click Here to Go >>>
Posted by အောင်မျိုး at 6:33 PM
Labels: Android Myanmar Font များ
တရားတော် နာကြားရန် ဆိုဒ်သို့
တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု မှ တင်ထားခဲ့သမျှ Post အားလုံးကြည့်ရန် ကလစ်နှိပ်ပါ...
ဆီးဂိမ်းအတွက် မြန်မာအလံနဲ့ ကြိုဆိုကြမယ်
MMYO Online Radio
သီချင်းတောင်းချင်ပါက dj@mmyos.com ကိုအပ်၍ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်
မိမိတို့ Website နှင့် Blog များတွင်ထည့်ချင်ပါက ဒီမှာ ကုဒ်ယူပါ
For Android ( အပုံကိုကလစ်ပါ )
Myanmar Models ဆိုဒ်သို့
Free Android Download Center ဆိုဒ်သို့
MP Firmware ဆိုဒ်သို့
Download Free Software ဆိုဒ်သို့
VIOOZ Movies ဆိုဒ်လေးသို့
GlowGaze Movies ဆိုဒ်လေးသို့
Free Movies Online ဆိုဒ်သို့
Photo Effect - Photoshop ဖြင့်ဓါတ်ပုံများဖြတ်ကပ်ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်မျှဝေသည် - ဒါလေးကတော့ Photoshop နဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကပ် လုပ်လဲဆိုတာ ပြပေးသွားပါ့မယ်..။ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက်အများကြီး အဆင်ပြေမယ့် နည်းလေးလို့ ထင်ပါတယ်..။...
U Win Myint (President of Myanmar)(PSD ဖိုင်အကြည်) - ကျွန်တော်လည်း စာစီစာရိုက် Group က ရတာလေကို မကြည်လို့ နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြင်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ .. လိုချင်တဲ့သူရှိရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ထားလိုက်ပါ...
▼ 2013 (1737)
MMAS Zawgyi Changer2version 1.0.6 (Beta) APK
Youtube က Video တွေ ကို Download ဆွဲဖို့ အတွက် Tub...
ပရိတ်၊ပဌာန်းပါဠိတော် APK ဖိုင်များ
Z1, Z Ultra, Tablet Z ထိ support လုပ်တဲ့ Sony Flas...
Intervideo DVD Copy5Platinum Full
နှလုံးသွေးနှင့်ရင်ခုန်ကြသူများ (2013) [Album]
Universal Driver Pack For All Windows
SEA Games Chinlone For Android
Internet Download Manager (IDM) 6.18 Build 10 (New...
SEA Games 1.1 For Android
Android Version 4xx ကနေ 4.3 ထိ မြန်မာစာတွေ မှန်စေတ...
Advanced SystemCare Pro v7.1.0.387 + Crack & Seria...
TouchPal Keyboard Apk ( Android App )
Samsung မိုဘိုင်းဖုန်း၏ လျှို့ ဝှက် ကုဒ်နံပါတ်များ...
Some of the Android Secret Code လေးတွေပါ..
HTC Firmware လေးတွေပါ...
All SONY Xperia latest Firmwares Here...
ဒါလေးကတော့ အသုံးများတဲ့ Nokia X2-01 Keypad ရဲ့ အလု...
Samsung ရဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအခြေခံလေးပါ....
Analog meter ဖြင့် Condenser တိုင်းနည်း အပိုင်း (2...
Transistor ( ထရန်စစ္စတာ ) - အပိုင်း ၂
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-32 (9.12.13)
ခြင်းလုံးဂိမ်း ဗားရှင်း ၁.၁ Update ထွက်ပါပြီ!!
Wifi Password တွေကို မှတ်သားထားပေးမယ့် - WIFI Pass...
AuRa – ဝေးလို့မဖြစ်ဘူး (2013) [Mixtape]
Demojacktoo – နင်ပျော်မယ်ဆိုရင် (2013) [Album]
Alien Shooter v1.0.2 APK (အကြိုက်ဆုံးသေနက်ပစ် Game...
Plants vs Zombies2(APK + DATA) For Android
Root လုပ်ရာမှာ မြန်ဆန်လွယ်ကူစေတဲ့ 1 Click Root Too...
၁၅၀၀ တန်ဖုန်းကဒ်ဖြင့်အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံကိုပြည်တွင...
Advanced Word to PDF converter 6.4
Electronic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတ မှတ်သားဖွယ်ရာ APKေ...
အခြေခံ Battery Phone charger လေးပါ ညဏ်ရှိသလိုအသုံး...
Sony ericsson x10i Mic မကောင်းရင် ဒီလိုလေး အစားထို...
Samsung galaxy Y S5360 Power မပွင့်တာ Power မနိူးရ...
MO MO Tablet ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ အခြေခံသဘောတရားလေးတွေ...
surface mount chip tramsformar(Ac to Ac) အကြောင်းေ...
IC ( Integrated Circuit ) ၊ အိုင်စီ
Diode ( ဒိုင်အုပ် )
Transistor ( ထရန်စစ္စတာ )
Condenser (သို့) Capacitor အကြမ်းဖျင်း အလုပ်လုပ်ပံ...
Resistor ( ရီစစ္စတာ ) - အပိုင်း (၅)
Resistor ( ရီစစ္စတာ ) - အပိုင်း (၄)
Resistor ( ရီစစ္စတာ) - အပိုင်း ( ၃ )
Resistor ( ရီစစ္စတာ) - အပိုင်း ၂
Resistor ( ရီစစ္စတာ )
Analog meter ဖြင့် Resistor တိုင်းနည်း အပိုင်း (၁)...
လူပျိုလှည့်တေး – Bunny Phyoe [ CD ]
ဖုန်အချင်းချင်း Data ကူးရာမှာ မြန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့- Za...
Fast & Furious6The Game Apk + Data 3.3.0 Downloa...
Real Race Game For PC
www.MyanmarFlashGame.tk တွင် Games များအလွယ်တကူဆော...
Dolphin Browser v.10.1.2 APK (Facebook သုံးရင်အရမ်...
Mobile Guide Issue Vol-2 ၊ Issue-31 (2.12.13)
Android Phone မှာ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုလေးရေးသားနိုင်မယ...
Shake Call Accept v.1.0 (ဖုန်းလာပြီဆိုရင် လှုပ်ပြီ...
ဖုန်း ( Hardware ) (7)
မိုဘိုင်းလ် Code များ (3)
အီလက်ထရောနစ် အခြေခံ (27)
ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း (23)
မြန်မာ ဟင်းချက်နည်းများ (64)
Myanmar Musics (415)
Myanmar Online Movies (25)
မွန် သီချင်းများ (19)
တရားတော် အခွေများ (9)
သီချင်း စာအုပ်များ (8)
AJ2Mobile Shop (5)
အထက (တကူ) ငွေရတုသဘင်နှင့် မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲအတွက် အသိပေးနှိုးဆော်လွှာ (1)
International Movies & Musics
International Songs (70)
Hollywood Movies 3gp (56)
Hollywood Indo Mp3 Songs (48)
Movies 2016 HD ကားများ (31)
Chinese Mp3 Songs (17)
YouTube Full Movies ဇာတ်ကားများ (8)
Korea Songs (4)
English Movies များ (3)
Acer Driver ( For PC ) (1)
Acer ဖုန်း Root ကြမယ် (1)
Adobe Photoshop CS6 (5)
Android APK ပြုလုပ်နည်း (1)
Android Myanmar Font များ (36)
Android Os Application များ (480)
Android Os Games ( APK+DATA) များ (14)
Android Os Games များ (97)
Android Phone Usb Driver များ (13)
Android Root Tool များ (38)
Android Tool များ (3)
Android ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ (39)
Android ဖုန်းတွင် အသုံးပြုသော လျှို့ ဝှက်ကုဒ်များ (2)
Audio Editor (3)
Aurora 3D Presentation 2011 (5)
Backup and Restore Software လုပ်နည်း (1)
China ဖုန်းတွေအတွက် Firmware Restore (1)
Computer CCleaner (13)
Computer Desktop Wallpapers (8)
CyberLink Power DVD Ultra (4)
Delete လုပ်မိတဲ့ပုံတွေကို Recover ပြန်လုပ်ရ အောင် (12)
Driver Checker (14)
Driver Genius 12 Full Version Pre Activated ( 14 MB ) (1)
English to Myanmar / Myanmar to English Dictionary (10)
ESET NOD32 Key Finder 2013 v1.0 Premium Final (6MB ) (3)
Folder တွေကို ဒီဇိုင်းပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းရတဲ့ Software (9)
For Nokia Software and Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ (4)
For PC Collections (1)
Free call internet by Mobile number (1)
Hello Firmware များ (1)
HTC ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ (15)
Huawei Root လုပ်နည်းများ (15)
imobile istyle root လုပ်နည်းများ (6)
Internet Download Manager (37)
IObit Malware Fighter Pro 2.0.0.202 Full Version ( 20 MB ) (2)
ipad တို့နှင့် ပတ်သက်သမျှ (1)
Kimfly Firmware များ (1)
Laptop Driver များ (2)
Lenovo Offical Firmware တင်နည်း (1)
Moborobo PC Suite နောက်ဆုံးထွက်(iOS -Android OS အားလုံးအတွက်) (7)
MP3 Converter (18)
Music Player (14)
Myanmar Font (8)
MyPhone Firmware များ (1)
Nero Burning Rom Converter (29)
Nod 32 Key (9)
Nokia Games (2)
Nokia PC Suite (2)
Nokia ဖုန်းများအတွက် မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း (2)
Ooredoo Firmware များ (1)
Oppo Firmware များ (1)
Pattern Lock နဲ့ Gmail Account တွေကို အလွယ်တကူဖျက်မယ် (8)
PDF Convert (11)
Revo Uninstaller (2)
Ringtone များ (6)
Run Box Codes (1)
Samsung Android Firmware တင်နည်းများ (9)
Samsung FRP 2016 Lock ဖြေနည်း (1)
Samsung Galaxy မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း (3)
Samsung Mobile Secret Codes (2)
Software မသုံးဘဲ WIFI ပြန်လွှင့်နည်း (1)
Software တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ License Key ပါ... (17)
Sony ဖုန်း Root လုပ်နည်းများ (6)
System Care (14)
Team Viewer (Portable) (2)
Theme အလန်းလေးသုံးရအောင် (10)
Video SlideShow Converter (13)
VZO Chat (1)
Window 8 (24)
WINRAR 5.00 Beta3Just Double Click (9)
Xilisoft video converter Ultimate v7.3 for Windows XP (5)
တကူ သားလေး For Android APK (2)
ဖုန်းပြုပြင်ရန် အတွက် Website ကောင်းများ (10)
မိုဘိုင်းလ် ဂျာနယ် (81)
မြန်မာ မင်းသား၊ မင်းသမီး ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ (1)
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် (4)
အသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားပြော (၁၀၀၀) (PDF) (3)
င်္For Nokia Themes (1)
တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာစုစည်းမှု . Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.